राजनीति « Himal Post | Online News Revolution
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोदीसँग भेटवार्ता गर्दै
३१ भदौ, नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय सकमक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदराबाद हाउसमा पुगेका हुन् । त्यहाँ दुई देशको
प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण भेटघाट आज,दुईपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने
३१ भदौ, काठमाडौं । चारदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा भारतमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज महत्वपूर्ण भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत महत्वपूर्ण
"खोलो तर्यो लौरो विर्स्यो जस्तै भयो" दुताबास को कार्यक्रममा 'प्रचण्ड'ले किन यस्तो भने ??
अर्जुन खनाल/गोभिन्द पोख्रेल , नयाँ दिल्ली, १५ सेप्टेम्बर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” यतीबेला छिमेकी राष्ट्र भारतको ४ दिने औपचारीक भ्रमणमा छन। आज भारत आएको पहिलो दिन नेपाली राजदुतावासमा भारतीय समाजवादी
प्रचण्ड दिल्ली जाँदा भारतले गर्न खोजेको काम के हुन् ? ल हेर्नुस !
काठमाण्डु, २९ भदौ– भारतले सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धियताका सबै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पठाएको छ । भदौ पहिलो साता उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सोमबार परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण
कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुनुपर्छ :बादल
सिन्धुली, २७ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामबहादुर थापाले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सिन्धुलीको एकता भेलालाई
नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न विद्यार्थीहरुको आग्रह
२७ भदौ, काठमाडौं । बिभिन्न दल निकट विद्यार्थी नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेका छन् । आठ
‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका लागि महत आज भारत जाँदै
२६ भदौ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका लागि आज भारत जाँदै छन् । प्रधानमन्त्रीको बिहीबारदेखि हुने भारत भ्रमणको एजेण्डा तथा भ्रमणको आवश्यक तयारीका
छिमेकी मुलुक भारत जाँदा पनि नेपालीलाई भिसा !
२५ भदौ, काठमाडौं । भारतीय नागरिकलाई जुनसुकिै देश भएर नेपाल आउन भिसा चाहिँदैन । तर, नेपालीलाई चीन हुँदै भारत जान भने भिसा अनिवार्य चाहिन्छ । दुई देशबीतका विभिन्न सन्धी समझौताविपरीत
संबिधान संसोधनमा हिन्दुराज्य पुर्नस्थापना : कमल थापा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब हुने संबिधान संसोधनमा हिन्दुराज्य पुर्नस्थापना गरि धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । मधेशबादीदलहरुको चाहनाअनरुप संबिधान संसोधन भए आफूहरुको यो मुद्धा पनि संबोधन गर्नुपर्ने
शंकर पोखरेललाई हत्कडी लगाउन माग गर्दै उजुरी !
काठमाण्डु, २२ भदौ– एमाले नेता शंकर पोखरेलविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही माग गर्दै मुद्धा दायर गरिने भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसम्वद्ध संघीय समाजवादी युवा फोरमले
दिपकुमारलाई फेरि राजदूत बनाएर भारत पठाउने निर्णयपछि एमालेको यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाण्डु, २१ भदौ । नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलएका तत्कालीन भारतका लागि नेपालका राजदूत दिपकुमार उपाध्यायलाई फेरि सोही ठाउँमा फिर्ता पठाउने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णयमाथि असहमति जनाएको